Sary sy fiasa mivoaka amin'ny Samsung Galaxy Watch Active | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | About us, SmartWatch
Samsung dia tsy mijanona amin'ny famoahana vaovao tamin'ny herinandro lasa. Ho fanampin'ny famoahana arivo sy iray momba ny Samsung Galaxy S10 izay miha-akaiky, omaly dia fantatray fa mety ho tonga ihany koa ireo Galaxy Buds. Ary toy ny hoe tsy ampy izany, androany indray i Samsung dia miverina amin'ny vaovao vokatra iray hafa an'ny orinasa izay afaka mahita ny hazavana haingana noho ny nandrasana.
Amin'ity indray mitoraka ity dia manodidina ny ny kinova vaovao amin'ny smartwatch an'ny goavambe Koreana. Misaotra ireo fivoahana vitsivitsy izay afaka nahita ny ho endriny ilay antsoina hoe Samsung Galaxy Watch Active. Ankoatr'izay, ny angona sy ny toetra ara-teknika dia nihoatra ihany koa, satria tsy azo atao raha tsy izany dia mampitombo ny fanantenana ny hetsika Samsung manaraka.
Ny Samsung Galaxy Watch Active dia hanana fanatanjahantena
Na dia finday ilaina aza ny smartwatch ho an'ny mpampiasa rehetra. Marina izany amin'ny sehatry ny fanatanjahantena dia mahita ampahany betsaka amin'ny mpampiasa izy misaotra ny isan'ny fampiharana natokana ho hitantsika. Fandrefesana fitempon'ny fo, ny mety hisian'ny zotram-kazo, ny fanarahana ny fiofanana, ohatra, manao smartwatches fitaovana mety ho an'ny atleta mahomby kokoa.
Samsung, mahafantatra an'io "filàna" io, dia hanolotra fitaovana misy orientation mazava be amin'ny activité ara-batana. Fa hanao an'izany nefa tsy ilaozanao a endrika tsara tarehy, ary manisa tombony azo avy amin'ny fanjakana. Tsy very maina, hanana izany Teknolojia 4G, NFC, LTE ary mpandahateny. Io koa dia nihoatra ny haben'ny azy efijery, izay ho 1,3 santimetatra miaraka amin'ny famahana ny 360 x 360 teboka. Fisondrotana efijery izay mety ho lavo fohy noho ny fironana hampitombo ny haben'ny efijery smartwatch.
Raha ny zavatra hitantsika ao anatiny dia afaka milaza aminao ihany koa izahay fa nofidin'i Samsung ny Processeur Exynos 9110. Azo atao ihany koa, toy ny maodely ankehitriny, fa misy karazany roa izy io. Ary mbola tsy mazava ny habetsaky ny herin'ny baterinao. Mihoatra noho ny antontan'isa ampy hiteraka fanantenana bebe kokoa momba ny hetsika amin'ny 20 Febroary. Hihaona amin'ilay andro Samsung Galaxy S10, headphone Galaxy Buds ary ny Galaxy Watch Active vaovao ve isika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Sary sy fiasa voasivana amin'ny Samsung Galaxy Watch Active